Data Recovery, File Recovery နှင့် Email Recovery Software တို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် DataNumen
Data Recovery Software များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် MS Office ဖိုင်များ၊ အီးမေးလ်ပြန်လည်ဆယ်တင်မှု၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အရန်ကူးဖိုင်များ၊ ဒေတာဘေ့စ်များ၊
မော်ကွန်းတိုက် / Backup ကို
ပုံ / စာရွက်စာတမ်း
DataNumen ဒေတာပြန်လည်နာလန်ထူနည်းပညာအတွက်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုရအချက်အလက်များပြန်လည်ရယူသည့်ဆော့ဝဲလ်ထုတ်ကုန်များ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အချက်အလက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် developer များအတွက် software development kit (SDK) အပါအ ၀ င်အချက်အလက်ပြန်လည်ရယူခြင်းဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။
သင့်ကုန်ပစ္စည်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမီတာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ost! သို့သော်လည်းငါသည်ငါ l ဒေတာကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်ဘာမှမစဉ်းစားကြဘူးost။ ငါပိုပြီးသောငါပြီးသားရှိခဲ့အရာကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်
သင့်ကုန်ပစ္စည်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမီတာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ost! သို့သော်လည်းငါသည်ငါ l ဒေတာကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်ဘာမှမစဉ်းစားကြဘူးost။ ယခင်ထုတ်ကုန်များထက်ပိုပြီးသောကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသောအရာများကိုပြန်လည်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ပျောက်ဆုံးနေသောဒေတာရှိခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်လျှင်ပြန်လည်ရယူရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၅၀ ပေးရမည်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်အပြုသဘောဆောင်ပါကပျောက်ဆုံးသောဒေတာအားလုံးရှိကြောင်းကျွန်ုပ်သေချာပေါက်ပေးမည်။ ဒါပေမယ့်ဒေါ်လာ ၁၀၀ မတန်ပါဘူး။
မစ္စ Mascha Fujimoto
ငါသည်ငါ့နောက်ဆုံးအပေါ် Outlook 2010 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
ငါက Windows 2010 ကို run ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကွန်ပျူတာမှာ Outlook7ကိုအသုံးပြုနေတယ်။ အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကဆုံးသွားတယ်။ ကံကောင်းစွာပဲ၊ ငါ (Outlook pst ဖိုင်များအပါအဝင်) ကျွန်ုပ်၏ဖိုင်အားလုံးကိုပြင်ပ drive သို့ကူးယူခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည် 14.5 GB ကိုအီးမေးလ်နှင့်ပူးတွဲဖိုင်များ (အီးမေးလ်ခုနစ်နှစ်ခန့်, ထိုအရာအချို့ကိုငါ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်) ပါရှိသော encrypted pst ဖိုင်အတွက်စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့။
ငါ၏စမ်းသပ်ဗားရှင်းကူးယူခဲ့သည် DataNumen Outlook Password Recovery (Outlook Repair သို့မဟုတ် Outlook Drive Recovery နှင့်မမှားရ) နှင့် starပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ted လုပ်ပြီးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် backup ရှိကြောင်းသေချာစေရန် encrypt လုပ်ထားသော pst ဖိုင်ကိုကူးယူနိုင်ရန်အတွက်၎င်းကိုစတင်ပြီးမှသာဖျက်သိမ်းခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်၏ Outlook Files ဖိုင်တွဲတွင်အရန်တစ်ခုရှိနေသည်ကိုမေ့နေသည်) ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ငါရုံးသုံးစမ်းသပ်မှုဗားရှင်းကိုထပ်မံမသုံးနိုင်တော့ဘူး။
ငါအပြည့်အဝဗားရှင်းဝယ်ယူ, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုစမ်းသပ်မှုဗားရှင်းအပြည့်အဝဗားရှင်းသို့ပြောင်းရန်ညွှန်ကြားချက်နှုန်းငါ၏အအသုံးပြုသူ ID နှင့်ကုဒ်စမ်းသပ်အတွက်စမ်းသပ်မှုဗားရှင်းထဲသို့ဝင်ရန်အဘို့အလမ်းမရှိသော။ ဒါနဲ့ငါအီးမေးလ်ပို့ DataNumen။ ၁၂ နာရီလောက်အကြာမှာသူတို့ကငါ့ကိုအပြည့်အဝဗားရှင်းအတွက်ဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးစမ်းသပ်ဗားရှင်းကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအပြည့်အဝဗားရှင်းကို install လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။
စမ်းသပ်မှုဗားရှင်းကို uninstall လုပ်ရန်နှင့် version အပြည့်အစုံ (version 1.2.1.0) ကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာမရှိပါ။ စာဝှက်ထားသော pst ဖိုင်ကိုရယူရန်စကားဝှက်တစ်ခုလျင်မြန်စွာရရှိခဲ့သည်။
ငါဘယ်လောက်ကြာကြာကြည့်ဖို့စစ်ဆင်ရေးကိုနောက်တဖန်လုပ်တယ်။ ပရိုဂရမ်ကကျွန်တော့် pst ဖိုင်ကိုတစ်မိနစ်နှင့် ၄၇ စက္ကန့်အတွင်းစာဝှက်ဖြည်လိုက်သည်။
စကားမစပ်၊ ကျွန်ုပ်၏ Outlook Files လမ်းညွှန်ရှိအခြား pst ဖိုင်များကဲ့သို့သောမော်ကွန်းတိုက်ဖိုင်များသည်စာဝှက်မထားပါ။ ဒီ pst ဖိုင်ကိုဘယ်လိုစာဝှက်တယ်ဆိုတာမမှတ်မိဘူး။ သင်ရယူရန်လိုအပ်သည့် pst ဖိုင်သည်စာဝှက်ထားရန်သေချာစေရန်သင်စမ်းသုံးထားသောမူကွဲ (သင်တစ်ချိန်ကအသုံးပြုခဲ့သည်) ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
နောက်ဆုံးဖော်ပြရမည့်အချက်မှာ - စမ်းစစ်ထားသောဗားရှင်းသည် pst ဖိုင်ဤကဲ့သို့သောအရွယ်အစားကြီးမားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုစာဝှက်ဖြည်မည်လား၊ မသိပါ၊
ဤပရိုဂရမ်သည်အသက်ကယ်သမားဖြစ်ပြီးဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုသည်အလွန်ကောင်းသည် (စကေး ၁ မှ ၁ မှ ၁၀ အထိ) ၇ နှစ်လောက်ကြာအောင်အီးမေးလ်ပြန်ပို့လိုက်တယ် မယုံနိုင်စရာ!
အငြိမ်းစားဆေးရုံ IT ညွှန်ကြားရေးမှူး
Blythewood SC၊ အမေရိကန်
လျှောက်လွှာကောင်းပါတယ် အခြေစိုက်စခန်းလည်း OK ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Marcin K သည်
ul ။ Leśna 17C, 62-006 Gruszczyn
developer များအတွက် SDK
ကျွန်ုပ်တို့၏ software development kit (SDK) သည်သင်၏မတူနိုင်သည့် data recovery data များကိုသင်၏ software ထဲသို့လွယ်လွယ်ကူကူနှင့်ပေါင်းစည်းရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။